NCS ဘွဲ့လွန်အခွင့်အလမ်းများ - ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်ဤ Read! - Element ကို Society က
ငါတို့သည်သင်တို့ / သင့်အသက်ပျိုသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဒီနွေရာသီ NCS အပေါ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးစွာသောအချိန်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုတဦးအားဖြင့်သင်တို့၏ခရီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒြပ်စင်လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့ induction အစည်းအဝေး
နေ့စွဲ: 2nd အောက်တိုဘာလ 2018
အချိန်: 6pm သည်အထိ 7pm
တည်နေရာ: ဒြပ်စင်အိမ်, Arundel လမ်း, S1 2NT
အချက်အလက်များ: ဒြပ်စင်လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦးမေတ္တာသည်အတိုင်းပြုပါအရာအားလုံးကိုပုံစံသွင်းသွင်း! သင်, အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်ပေါင်း NCS အချိန်ဇယားကိုကူညီမြို့တော်ကိုဖြတ်ပြီးလူငယ်များအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရရှုထောလူငယ်တစ်လူတစ်ဦးပွိုင့်ကနေပိုမိုကျယ်ပြန်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းပုံဖော်ကိုကူညီနိုင်မဖြစ်ရပ်များ & စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစည်းရုံးလိမ့်မယ်။
sign up ကိုမှဘယ်လို: အသော induction အစည်းအဝေးတလျှောက်လာကြပြီးပိုထွက်ရှာတွေ့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်သူဌေးအပေါ် Richard.r@elementsociety.co.uk ပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အကြောင်းကို chat ရန်။
သင်တန်း induction အစည်းအဝေးအတွင်းခေါင်းဆောင်များ:
နေ့စွဲ: 3rd အောက်တိုဘာလ 2018
အချိန်: 6pm - 7pm
အချက်အလက်များ: ဤသည်ကိုအခမဲ့လေ့ကျင့်ရေးခေါင်းဆောင်မှု, ရေးအဖွဲ့ Dynamics ကို, မတူကွဲပြားခြင်းပွားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအတွက် module တွေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ဤသည်လေ့ကျင့်ရေးများတို့သည်ဤလောကသို့ထွက်တဲ့အခါသင်အစွန်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုလည်းအနာဂတ်တွင် NCS အလုပ်လုပ်စိတ်ဝင်စားနေလျှင်ယူရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒြပ်စင်ချန်ပီယံလိဂ် induction အစည်းအဝေး:
နေ့စွဲ: 4th အောက်တိုဘာလ 2018
အချက်အလက်များ: ဒြပ်စင်ချန်ပီယံလိဂ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှက်ဖီးန်းကျင်ကျောင်းများ / ကောလိပ်အတွက် NCs အကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန့်နှံ့ကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ hoodies အတူတက် branded get နှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ကိုနွေရာသီ 2019 များအတွက် NCS အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ကိုကူညီနိုင်အောင်အခြို့သောအခမဲ့သင်တန်းပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်!
sign up ကိုမှဘယ်လို: အဆိုပါ induction အစည်းအဝေးတလျှောက်လာကြပြီးပိုထွက်ရှာတွေ့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်သူဌေးအပေါ် Richard.r@elementsociety.co.uk ပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အကြောင်းကို chat ရန်။
အချက်အလက်များ: ကျနော်တို့တိုင်း NCS ဘွဲ့ရအဆက်အသွယ်ပြန်ရနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူ chat နိုင်ပါတယ်သေချာအောင်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Element ကိုဆရာအစီအစဉ် sign up ကိုနှင့်တစ်ဦးဆရာအဖြစ်န်ထမ်းများ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့သငျသညျအားပေး။ ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများကမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သင့် CV / uni application ကိုကျော်ကြှနျုပျတို့မကျြစိကိုနှင်ထုတ်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းများနှင့်အင်တာဗျူးခြင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပံ့ပိုးရန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
sign up ကိုမှဘယ်လို: အီးမေးလ်ပို့ရန်သူဌေးအပေါ် Richard.r@elementsociety.co.uk ဆရာတာဝန်ပေးအပ် Element တစ်ခုရဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို chat ရန်။
အချက်အလက်များ: သင်သည်သင်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ခြားနားချက်အောင်ဆက်လက်ပေမယ့်လာမယ့်ယူအဘယ်သို့ခြေလှမ်းများမသိရပါဘူးမှုတ်သွင်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုပါကသို့ဖြစ်လျှင်ဤအခွင့်အလမ်းသင်တို့အဘို့ပါ! အကြှနျုပျတို့သညျသငျ၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်သူတို့ကိုမှတက်လက်မှတ်ထိုးအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးစေခြင်းငှါ, အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေကူညီဖို့ပါလိမ့်မယ်။
sign up ကိုမှဘယ်လို: အီးမေးလ်ပို့ရန်သူဌေးအပေါ် Richard.r@elementsociety.co.uk နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူ chat ဖို့အဆင်ပြေနေ့က / အချိန်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။